အလိုအလျောက်စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး,အလိုအလျောက်သွပ်ရည်စိမ်တံခါး,အလိုအလျောက်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > roller Shutter တံခါး > သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး > အလိုအလျောက်စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
1. ဤသည်ကြိတ်စက်ရှပ်တာ slats ရာကိုပိုပြီးအားကောင်းနှင့်ခံနိုင်ရည် prying ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူပူ extrusion ဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။
2. ဒီသစ်ကိုလှိမ့ရှပ်တာပစ္စည်းနှင့် struction များအတွက်ဟောင်းကိုလှိမ့ရှပ်တာအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ နယူးလှိမ့ရှပ်
ထိထိရောက်ရောက်ခိုင်မာတဲ့အလင်း irradiation နှင့်ဖြည့်စွက်-Ray radition တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
3. ကိုလှိမ့ရှပ်၏ပြေးအတော်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်ဆူညံသံထက်နည်း 58 ဖြစ်ပါတယ်။
4. Anti-အိမ်ထဲမှာသူခိုးသော့ခတ် devices များနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆိုပါလှိမ့ရှပ်တာ။ ဒါကြောင့်ပိတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ပြင်ပမှဖွင့်လို့မရပါဘူး။ နှင့်
အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီးလျှင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါဖွင့်ပွဲမြန်နှုန်းတက် 0.1m / s နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအတွက် 5. အမျိုးမျိုးသော desins နှင့်အရောင်များ။
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဆိုစတိုင် roller ရှပ်တာတံခါးများထုတ်လုပ်ခြင်းနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : roller Shutter တံခါး > သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
စက်ရုံအစာရှောင်ခြင်း Rolling အလိုအလျောက် Rolling Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး အလိုအလျောက်သွပ်ရည်စိမ်တံခါး အလိုအလျောက်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter လျှပ်စစ်သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး လူမီနီယမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး စက်မှုမြန်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး